दिपिका शाहिद भन्दा अग्ली हुँदा निर्मातालाई समस्या - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
दिपिका शाहिद भन्दा अग्ली हुँदा निर्मातालाई समस्या
७ मंसिर,२०७३ | Agency
शाहिद कपूर र दिपिका पादुकोणले हालैमात्र फिल्म पद्मावतीको लागि लुक टेस्ट गरेका छन् । तर उनीहरु बीचको एक असमानताले निर्माता तथा निर्देशक संजय लिला भंसालीलाई तनावमा पारिदिएको छ । खास कुरा के भने दिपिका पादुकोण शाहिद भन्दा अग्ली भईन् । जे हुनु पर्ने थियो त्यसको उल्टो भईदिँदा संजयलाई तनाव भएको छ ।
शाहिदले फिल्ममा राजा रतन सिंहको भूमिका निभाउने भएका छन् भने दिपिकाले रानी पद्मावतीको भूमिका । पूरानो जमानामा रानी भन्दा राजा धेरै अग्लो हुने गर्थे । त्यस कारण शाहिद दिपिका भन्दा होचो हुँदा निर्मातालाई अप्ठ्यारा परेकोे हो ।
भंसाली अब शाहिदको उचाई बढाउने सोचमा छन् । दिल्ली बेस्ड डिजाईनर रिंपल र हरप्रित नरुलाले शाहिद र दिपिकाको कस्ट्युम डिजाईन गर्ने भएका छन् । अब उनीहरुले नै दिपिका र शाहिदको उचाई मिलाउने छन् । रिंपल र हरप्रित पहिलो पटक भंसालीसँग काम गर्दैछन् ।
अन्तराष्ट्रिय मिडियाले एयरपोर्टमा प्रियंका ठानी दिपिकाको स्वागत, बुबा बनेका करणलाई फराहको यस्तो प्रस्ताव– आजको बलिउड अपडेट
बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा पछि हलिउडमा आफ्नो प्रतिभा देखाउन सफल अर्की नायिका हुन् दिपिका पादुकोण । उनले हालै मात्र एक्सः रिर्टन्स अ..
दिपिकासँगको ब्रेकअप बारे मुख खोले रणवीरले
जब युवराजलाई सोधियो, दिपिका र किम मध्ये कस्को किस कडा ?
दोहोर्याएर लुगा लगाउँदा फसादमा बलिउड अभिनेत्रीहरु
के छ दिपिकाले बुवाको लागि किनिदिएको फ्ल्याटको बिशेषता ?
दिपिका र रणवीरको पद्मावती टि भि भन्दा पहिले ईन्टरनेटमा आउने